पार्लर नगई अनुहार चम्काउन चाहानुहुन्छ ? उसोभए यी ६ घरेलु तरिका अपनाउनुहोस् « गोर्खाली खबर डटकम
२०७९ बैशाख ८ गते बिहिवार प्रकाशित
काठमाडौँ। अनुहार सुन्दर बनाउने जो कोहीको चाहना हुन्छ। तर पनि अनुहारमा आउने डण्डिफोर, दाग धब्बाका कारण अनुहारको सुन्दरता बिग्रन सक्छ।
यदी तपाई पनि अनुहारमा आउने दाग धब्बा तथा डण्डिफोर हटाएर अनुहारमा सुन्दरता देख्न चाहनुहुन्छ भने यी ६ टिप्सको प्रयोग गर्नुहोस्। जसले गर्दा तपाई बिग्रीएको सुन्दरता फिर्ता पाउन सक्नुहुनछ।यस्ता छन् अनुहारमा चमकता ल्याउने घरेलु उपायः
गर्भवती महिलाले भूलेर पनि नखानुहोस् माछा, नत्र हुनसक्छ बच्चालाई खतरा
भूलेर पनि गर्भावस्थामा नगर्नुहोस् यी गल्ती, नत्र बच्चा हुनसक्छ अपांग
पा’र्कि’ङ्ग वि’वा’दमा आफ्नै छोराले थ’प्प’ड हानी वु’ढी आमाको ह’त्या !!!